Oyster Peptides ọ ga - emeziwanye ọrụ nwoke?
1. Oyster nnyocha
2. Gịnị bụ Oyster Peptide?
3. Oyster Peptide Ọrụ na Uru
4. Gini bu uru Oyster Peptide Mgbe atụnyere ihe ndi ozo banyere nmeko nwoke?
5. Etu esi ewere Oyster peptide ntụ ntụ? Oyster peptide usoro onunu ogwu?
6. Oyster Peptide Side Mmetụta?
Ngwa Oyster Peptide Powder?
8. Okwu ikpe azu
oporo, nke anụmanụ dị n'oké osimiri bụ ihe na-ewu ewu nke oporo wepụ ntụ ntụ, abụrụla ọtụtụ mmadụ nri kemgbe iri afọ iri. I nwere ike rie ya ma ọ bụ sie ya. Nke ọ bụla nhọrọ ị họọrọ, anụ oporo ga-enye ahụ gị ọtụtụ ihe oriri. Ihe ndi ozo bu protein, mmanu mara mma, mineral na vitamin.
Ihe ọzọ gbakwunyere maka anụ a bụ na ọ dị obere kalori.
Enwere otutu ngwaahịa enwere ike iwepụta na anụ oporo, oporo peptide ịbụ otu n'ime ha. Na nyocha a, anyị ga-elekwasị anya na peystides oporo na mmetụta ha na arụ ọrụ nwoke, n'etiti uru ndị ọzọ.
Oyster peptide bụ ihe mgbakwunye sitere n'okike nke enwetara na protein anụ anụ site na usoro ihe ọmụmụ banyere ọtụtụ mmadụ. Peptide bara ụba na zinc, calcium, taurine, yana vitamin A, B1, B2, B5, C, D na E. Dị ka nke a, enwere ike iji ya dịka nri ahụike ma ọ bụ nri arụ ọrụ. Ọ nwere ọtụtụ uru ahụike n'etiti ndị mmadụ, ọkachasị ndị nwoke nwere nsogbu ahụ ike gbasara mmekọahụ.
Oyster bioactive peptides nwere ikike ndu dị elu ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa oporo ndị ọzọ. Ọzọkwa, oporo peptide nwere ọrụ physiological ka mkpa. Ọ ka mma, n'adịghị ka ngwaahịa oporo, oporo peptide ntụ ntụ nwere uto mara mma ma enweghi isi ya.
Oyster Peptide Ọrụ na Uru
Oyster peptide nwere ọrụ na uru ndị a:
Taurine nke a na-enweta peystide oporo nwere ike ime ka ihe zoro ezo nke mmadụ nwee n'ime. Ọzọkwa, usoro mmanụ oporo nwere ike igbochi mkpokọta mkpụmkpụ ma ọ bụ kpochapụ oke abụba nke imeju. Ọrụ abụọ a na-akwado imeju na ọrụ idobe ya.
Functionkwalite ọrụ mmekọahụ
Peystide oporo bara ụba na arginine, yana ihe Zinc, ha bucha nkpa maka aru ike nwoke na nwanyi. Ọ na - enyere aka n'ịwapụta homonụ mmekọahụ, gụnyere progesterone, testosterone na estrogen.
Mgbe ị na-ewere oporo peptide ntụ ntụ mgbe niile, ị ga-ahụ na ị ga-amatakwu mma ma ọ bụ mara mma kwa ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na ọ na-enye ahụ gị nri na-edozi ahụ nke na-akwalite metabolism nke anụ ahụ gị, na-eme ka ọ dị mma ma nwee mmiri nke ọma.
E wezụga nke a, ntụ ntụ sitere n'okike nwere ihe ndị na-akwalite mbibi melanin akpụkpọ. N'ihi ya, ụda akpụkpọ gị na-adịwanye mma ma na-adịwanye ọbụna. Ọzọkwa, ayodiin na tryptophan ndị dị na peptide nwere ike ime ka ntutu gị na-acha oji, si otú a mara mma karị.
Usoro nchịkwa dị mma
Ahụike nke sistem gị dị oke mkpa maka ọdịmma gị dịka ọ bụ nke na-echekwa ahụ gị pụọ n'ọrịa na ọrịa dị iche iche. Zinc so n’ime ihe dị mkpa n’usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ kwesiri ịdị ike ma rụkwa ọrụ n’ọrụ ya.
Ọ dabara nke ọma, peystide oporo na-enye ahụ gị nzụlite zinc nke sistem ahụ ọ na-alụso ọrịa ọgụ na-achọ ịnọgide na-aga ma tinye nje na nje dị ize ndụ. Ọzọkwa, peptide na-akpali mmepụta nke thymulin site na gland thymus. Nmepụta nke thymulin ka mma na-eduga n'ịkpụrụ T-cell ka mma na T4 Helper cell regulation, na-ebute sistemụ ahụ siri ike karị.
Offọdụ ọrịa na ọnọdụ ahụike ị nwere ike izere site na ị .ụ oporo peptide -agụnye:
Ọhụhụ na-adịghị mma
Ọrịa na-adịghị ala ala
Na-egbochi mmerụ ahụ-na-emebi emebi
Ihe mmiri Oyster, gụnyere peptides, nwere antioxidants na-echebe mkpụrụ ndụ na anụ ahụ site na ime ka mmadụ dị ngwa. oxidative nchegbu.
Mbelata ike ọgwụgwụ
Oyster peptide nwekwara amino acid, nke, ma e wezụga imeziwanye ọrụ imeju, nwere ike igbochi mkpo acid lactic. Ọzọkwa, acid ahụ na-enyere aka na ahụike anụ ahụ na nke uche. Nke a na - enyere mmadụ aka inwekwu ume ma nwee ọfụma ma nwekwuo mmụọ mgbe ọnọdụ ma ọ bụ ọrịa jisiri ike.
Oyster peptide bara uru nye mmadụ
Withmụ nwoke nwere nsogbu metụtara mmekọahụ nwere ike irite uru dị ukwuu na peptide oporo. Nke a na-agụnye ụmụ nwoke ndị nwere nkwarụ erectile, adịghị ike, prostate ma ọ bụ hypoplasia nke genital, n'etiti ọrịa ndị nwoke na ọnọdụ ndị ọzọ. Peystide oyste nwere ike imeziwanye mmekọrịta nwoke na nwanyị.
Ike dị n'ikike nkwalite ahụ ike mmekọahụ nke oporo peptide bụ ọdịnaya zinc dị elu, na-atụle na oporo bụ isi iyi kachasị nke zinc. Ihe zinc dị na oporo ji okpukpu iri karịa nke anụ na-acha ọbara ọbara.
Sayensị egosila na zinc na-eme ka ogo nke testosterone n’efu n’ahụ mmadụ. N'aka nke ọzọ, enweghi zinc bụ ihe na - ebute nsogbu nwoke na nwanyị dịka nsogbu erectile. Nke a bụ n'ihi na ha enweghị zinc zuru oke iji mepụta testosterone iji mepụta ma jigide akara ndị ọzọ na nwoke. Ọtụtụ mgbe, ụmụ nwoke nwere obere testosterone nwere obere agụụ mmekọahụ na arụmọrụ mmekọahụ.
Na mgbakwunye na zinc, ihe mpụ ahụ na-enwe vitamin D D nke ukwuu, nri ọzọ na-enyekwa ahụ mmadụ aka imepụta testosterone ọzọ. Ọ na - eme ka akwara dị ike na nhazi.
E wezụga nke ahụ, peystide oporo bara ụba na arginine, Chọpụta akụkụ yana selenium, ha niile na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepụta nwoke. N'ihi ya, nwoke na-eji ihe oporo a na-enwe ahụmịhe ọmụmụ.
Yabụ, mgbe mmadụ were oporo peptide, ọkwa testosterone ya na ọkwa nwoke na-emepụta, na-abawanye, si otú a na-emeziwanye ahụike mmekọahụ. N'ihi ike nke anụ ahụ n'ogwe na ụba testosterones, nwoke ahụ nwere ikike nke ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịnọgide na-ere ọkụ ruo ogologo oge.
Ewezuga dysfunction mmekọahụ na enweghi ike, bụkwa ọgwụgwọ dị mma maka ọnọdụ nwoke dịka ụbara prostate na hypoplasia ịmụba. Ọ bụ ya mere eji eji mmanụ oporo, karịsịa oporo peptide eme ihe, n'etiti ụmụ nwoke kemgbe ọtụtụ narị afọ-maka nkwalite ahụike ụmụ nwoke.
Mmetụta nke otu usoro onyster peptide nwere ike ịdịgide ruo ụbọchị asaa ruo ụbọchị iri. Nke a pụtara na nwoke agaghị anara mgbakwunye kwa ụbọchị maka ya ka ọ rite uru na uru mmekọahụ ya. N’ihe dị ka awa iri na abụọ ka ọ takingụchara mmeju ahụ, nwoke ga-amalite nwekwuo ume na mkpali nke inwe mmekọahụ.
Oyster peptide bara uru maka ụmụ nwanyị
Otu uru uru nke peystide oporo bụ nkwalite ahụ ike n'ozuzu ya. N'ihi ya, mgbe nwanyị na - enwe nsogbu ma ọ bụ na - enwee ike ịmụ nwa, na - aghọrọ onwe ya.
Na mgbakwunye, dị ka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na-enwe ahụ ike mmekọahụ ka mma mgbe ha gbasịrị oporo peptide. Ahụ nwanyị na - amịpụta testosterones kama ọ bụ n’akpụ akụrụ.
Agbanyeghị, ụmụ nwanyị menopausal dinara ogo nke hormone ahụ, n'ihi nke a, ha na-enwe obere libido na nkụ nwanyị.
Ọ dabara nke ọma, mgbakwunye zinc site na peystide oporo na-akwalite ọkwa testosterone nwanyị. Nsonaazụ nke ihe a bụ ịbawanye ụba nke nwanyi na mma. N'ihi ya, ọ ga-enwe ike inwe mmekọahụ karịa.
Kedu uru Oyster Peptide ma e jiri ya na ngwaahịa nkwalite mmekọahụ ndị ọzọ?
N'adịghị ka ọtụtụ mmelite mmekọahụ Ngwa ahịa, peptide oporo enweghị mmetụta ọfụma n'ihi na ọ bụ ihe ebumpụta ụwa. Ọzọkwa, mmadụ ekwesịghị ị toụ ya kwa ụbọchị, dị ka ọ dị na ngwaahịa ndị ọzọ maka mmelite mmekọahụ. Mmetụta nke otu usoro ọgwụgwọ oporo nwere ike ịdị ihe dị ka ụbọchị asaa ruo iri.
Usoro Oyster Peptide
Ndị a bụ usoro esoro iji wepụta peystide peystide na anụ oporo.
Nzọụkwụ nke mbụ: Iji anụ ahụ gwọọ anụ ahụ
Anụ anụ ahụ na nnu na mmiri. Nke a na - enye anụ oporo. Nzọụkwụ a bụ iji rụọ ọrụ na ịtọhapụ enzymes endogenous dị na oporo. N'ihi ya, a na-ebelata oke enzymatic na-emetụta enzymatic hydrolysis na-abịanụ.
Kwụpụ 2: Enzymatic hydrolysis
A na-edozi oporo anụ oyster nke emere na otu nke enzymatic hydrolysis. A na-enweta nke a site na ịgbanye slurry na 35 Celsius C na 45 Celsius C maka ihe dị ka otu awa ma ọ bụ abụọ. Mgbe ahụ, etinyere protein enzyme ma ọ bụ ọbụna alkaline protease na slurry. Ọnọdụ okpomọkụ ahụ gbanwere ihe dị ka 50 ruo 60 Celsius C maka hydrolysis iji gaa n'ihu ruo awa ise na asatọ na-esote.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-agbanwe pH na 5.0 ruo 5.5, a na-agbakwunye proteinase ekpomeekpo ma hapụzie enzymatic hydrolysis ka ọ gaa n'ihu ruo elekere abụọ ruo atọ ọzọ. Mgbe ahụ, onye na-ebute ihe karịrị mmadụ na-ebelata ka ọ nweta mmiri mmanụ oporo.
Kwụpụ 3: cokwacha ma nwechaa
A na-etinye carbon na-arụ ọrụ n'ime mmiri oporo a na-enweta na usoro nke abụọ. A na-akpali ngwakọta a na ọnọdụ okpomọkụ sitere na 45 Celsius C ruo 55 Celsius C maka minit 30 ruo 60. Mgbe ahụ, a na-ete ya anya ma jiri ya mee mkpo ala. Filtrate na-esite na ya bụ ihe anyị na-ezo aka na ya dị ka ngwọta dị ọcha nke peystide oporo.
Kwụpụ 4: centta mkpuchi na nhicha nhicha
Ngwunye peystide nke oporo dị ọcha ka etinyere ma ọ dịkarịa ala 35% ọdịnaya siri ike site na ntụgharị ikuku. A na - eteze ya ka ewepụta peystide oporo siri ike na-atọ ụtọ nke na enweghị isi uto ojoo ahụ.
Etu esi ewere Oyster peptide ntụ ntụ? Oyster peptide usoro onunu ogwu?
I nwere uzo abuo ichoro oporo peptide ntụ ntụ. Onye nke mbụ na-eme ya n'ime karama nwere mmiri dị mma ma drinkingụọ ngwakọta ahụ. N'aka nke ozo, i nwere ike buru ya kpoo kpoo ma someua miri iji mee ka o buru n’ime afọ gị.
Onweghi ogwu a kapịrị ọnụ maka peystides bioyst. Agbanyeghị, ego nke ụfọdụ ndị dibia na-atụ aro ka ọ bụrụ 500 mg, nke a na-ewekarị ugboro atọ n'ụbọchị. Ka o sina dị, n’ihi na nke a bụ nri ebumpụta ụwa na nke na-adịghị ize ndụ, ị nwere ike ịgbanwe doti ma ọ bụ ala, dabere na mkpa gị.
Oyster Peptide Side Mmetụta
Onweghi ihe mmuta choputara na sayensi nke oporo peptide ma obu ekpughe peptide. Nke a bụ makana ngwaahịa a zuru oke, na-enweghị ihe mgbakwunye ma ọ bụ ihe njiri egwu nwere ike imerụ ahụ.
Agbanyeghị, ndị nwere oke azụ nwere ike ịnwe ụfọdụ nsogbu ahụike mgbe hapụsịrị ọgwụ oporo. Yabụ, onye na-arịa ihe na-eri nri anụ ahụ kwesịrị izere ihe ọystụ, tinyere peptide.
Ọzọkwa, a na-adụ ndị nwere nsogbu ahụike adịrị ka ha gwa ndị ọkachamara ahụike ha tupu ha amalite iri ngwaahịa ọgwụ oporo. Nke a ga - enyere ha aka ịhapụ ihe ọ bụla nwere ike isite na mkparịta ụka dị n'etiti oporo na ọgwụ ndị ọzọ ha nwere ike ị takingụ.
E wezuga ya, ụfọdụ ọnọdụ ahụike na-apụ apụ nwere ike ịka njọ ma nwetakwa zinc ọzọ n'ahụ.
Ngwa Oyster Peptide Powder
N'ihi mmetụta nke ọgwụ ya, oporo peptide ntụ ntụ etinyere na ọgwụ ahụike. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi data dị oke mkpa nke na-akwado ike nke oporo iji gosipụta ọbara nwoke, ọtụtụ ụmụ nwoke nwere nsogbu ahụike metụtara mmekọahụ na-eji ngwaahịa ahụ.
Ọzọkwa, a na-eji ntụ ntụ eke eme ihe maka mmezi nke egbugbere ọnụ ọbara yana mgbochi nke nchịkọta platelet. A na-atụ aro ya maka ndị nwere ọrịa hyperglycemia, mgbochi dị ala ma ọ bụ metabolism na-adịghị mma ka ọ na-eme ka ọnọdụ ahụike ka mma.
Ndị nwere ọrịa cancer nwekwara ike were ntụ maka njikwa ọrịa a ka mma. Ngwa oporo nwere ike igbochi mkpụrụ ndụ kansa ịgbasa. A nwekwara ike iji ntụ ntụ mee ihe maka ọgwụgwọ ọnya na mmerụ ahụ ike systolic.
Ngwa ndị ọzọ nke oporo peptide ntụ ntụ gụnyere:
Nwee mgbochi nrụgide
Dị ka usọbọ maka ịmụba akwara ahụ
Mgbochi ịka nká
Ọzọkwa, ị nwere ike iji oporo peptide ntụ ntụ dika ihe oriri. Ọ masịrị ya nke ọma, ọ naghị anụ isi ya 'azụ dị' n'ụfọdụ ihe nri azu. Ọzọkwa, ọ nwere nri n'ụba na ahụ gị kwesịrị ịdị mma. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ezigbo mgbakwunye maka nri nkịtị gị.
Peystides peystides, mmiri ọgwụ oporo, bụ mgbakwunye nchebe dị mma nke enwere ike iji ya maka ọtụtụ uru ahụike. Otu uru dị na ya bụ nkwalite arụmọrụ nwoke. Peptides ndị a nwere ike ịbawanye libido n'ime nwoke nwere obere mmekọrịta nwoke na nwanyị na ọnụọgụ spam maka ụmụ nwoke nwere nsogbu ịmụ nwa. Womenmụ nwanyị Menopausal nke na-enwe ọ sexụ sexụ na -eko nwoke na nwanyị na nkụ aka ha nwekwara ike irite uru dị ukwuu na mpekere peptide.
Chen, D., Liu, Z., Huang, W., Zhao, Y., Dong, S., ye Zeng, M. (2013). Ọcha na njirimara nke peincide zinc sitere na protein oyster hydrolyzate. Akwụkwọ akụkọ nri, 5(2), 689-697.
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008). Ihe nchebe nke peptide antioxidative nke e mere ka ọ dị ọcha site na eriri afọ nke oyster, Crassostrea gigas megide mmebi DNA na-akpata nsogbu. Teknụzụ Bioresource, 99(9), 3365-3371.
Umayaparvathi, S., Meenakshi, S., Vimalraj, V., Arumugam, M., Sivagami, G., & Balasubramanian, T. (2014). Ọrụ antioxidant na mmetụta nke anticancer nke peptide bioactive site na enzymatic hydrolyzate nke oyster (Saccostrea cucullata). Biomedicine & Mgbochi Nri, 4(3), 343-353.
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, & Wah, C. (2017). Ngwa Patent US nke Nọ 15 / 542,743.
Zeng, M., Cui, W., Zhao, Y., Liu, Z., Dong, S., & Guo, Y. (2008). Antiviral nọ n'ọrụ peptide si oporo. Akwụkwọ akụkọ Chinese nke Oceanology na Limnology, 26(3), 307-312.